262.5 mamirioni emadhora ekuAmerica akagadzirwa kubva kuCuracao kushanya mumwedzi mishanu yekutanga
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » 262.5 mamirioni emadhora ekuAmerica akagadzirwa kubva kuCuracao kushanya mumwedzi mishanu yekutanga
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Curacao Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vese vanosvika stayover vanosvika munaMay vakanaka, vachinyora 7% kukura, yakashuma iyo Curacao Tourist Board (CTB).
Vese stayover vanosvika munaMay vakanaka, vachinyora 7% kukura, yakashuma iyo Curacao Tourist Board (CTB). Hwevanhu vanosvika 31,251 29,196 vakasvika vakagamuchirwa muna Chivabvu gore rapfuura vanosvika 13,844 vakasvika vakaverengwa. Curacao yakagamuchira vashanyi vanosvika 14 13,000 vestayover vanobva kuNetherlands, nyika huru inogadzira yakavhara Chivabvu nekukura kwakapetwa kaviri manhamba e44%. Ino inguva yekutanga munhoroondo kuti nyika yadarika vashanyi zviuru gumi nezvitatu kubva kuHolland muna Chivabvu. Netherlands inoenderera mberi iri nyika inotungamira uko 1,361% yemugove kubva kune vanosvika stayover iri kutanga. Nyika yechipiri huru muEurope iGerman. Gore rino pasina sevhisi yakananga kubva kuGerman 9 vashanyi veGerman vakanyoreswa, 12% inoderera kune vanosvika stayover. Pakazara, dunhu reEurope rakakura ne2018% muna Chivabvu 16,675. Hwerengedzo yeXNUMX vashanyi vestayover vakanyorwa.
CTB yakanyoreswa huwandu hwevane 7,012 stayover vashanyi vanobva kuNorth America muna Chivabvu 2018, vachiisa North America iri yechipiri pakupa pakupa kune vashanyi vanosvika. Curacao akagamuchira zvachose 1,089 stayover vashanyi vanobva kuCanada. Kuwedzeredzwa kwendege dzeWestJet muna Chivabvu kwakaguma ne66% yevamwe vashanyi vekuCanada kupfuura Chivabvu 2017. Kubva kuUnited States of America, kuwedzera kwe14% kunyoreswa muna Chivabvu 2018. Pakazara, vashanyi ve5,923 stayover vakanyoreswa. Gore rakapera, Curacao yakanyorwa 5,186 stayover vanosvika kubva kuUSA. Iwo akanaka manhamba kubva kuUSA ndiwo mhedzisiro yechipiri vhiki nevhiki kutiza kubva kuCharlotte uye kumusoro-gauge yemidziyo neAmerican Airlines kubva kuMiami.
Nyika mbiri dzechipiri dzinotarisa kubva kuSouth America dzakaita zvakanyatsonaka kurekodha kukura kwemadhijiti maviri. Kubva kuColombia, nyika yechitsuwa yakanyoresa kuwedzera kwe11% kusvika pa1,114 stayover vashanyi. Kuwedzera kwevanosvika stayover mhedzisiro yekushambadzira kuedza. Traffic kubva kuBrazil yakanyorera kukura kwe24% muna Chivabvu 2018. Pakazara, 755 maBrazil vakagamuchirwa. Vashanyi vanosvika 1,799 veCaribbean vakagamuchirwa muna Chivabvu 2018. Kubva kuchitsuwa chemuvakidzani cheAruba, kukura kwe4% kwakanyoreswa. Vashanyi vanosvika 977 veAruban vakaenda kuCuracao muna Chivabvu.
Ndira kusvika Chivabvu Vashanyi Vanosvika 2018
Pakati pemwedzi mishanu yekutanga ya5, huwandu hwevane 2018 veDutch vakagamuchirwa. Gore rapfuura munguva imwecheteyo, 74,371 vashanyi veDutch vakaverengwa, kuwedzera kwe67,560%. Kubva kuUnited States of America, kukura kwegore-kusvika-zuva kwakanyorwa pa10%, tichiverenga huwandu hwevashanyi ve11 vekuUS kubva munaNdira kusvika Chivabvu 29,249. Muna 2018, Curacao yakagamuchira vanosvika mazana matatu nemakumi matatu nemakumi matatu neshanu vaisvika kubva kuUSA. Canada yakakura nekunyora 2017% vashanyi, tichiverenga huwandu hwe26,395 vanosvika stayover mumwedzi mishanu yekutanga ya7.
Iyo yakazara stayover vanosvika mumwedzi mishanu yekutanga vakasara vakaenzana kana vachienzanisa negore rapfuura. Curacao yakagamuchirwa muvashanyi 5 173,984 stayover vashanyi mumwedzi mishanu yekutanga ya5. Kana iyo yekushanya kuverenga kweVenezuela ikatorwa kubva kune vese vanosvika stayover, ingadai yakanyoresa kukura kwe2018%. Iyi inokwana gumi nemakumi mana nevashanu vashanyi. Iwo-e-kudhara stayover vanosvika zvakare anoratidza kukura kwakasimba kubva mumisika yekutarisisa. Yakanangana nemadhora mazana maviri nemakumi maviri nemaviri emadhora ekuAmerica akagadzirwa nehupfumi hwemuno mumwedzi mishanu yekutanga yegore ra6. 10,404% yemhedzisiro yakanangana inogadzirwa kubva kuvashanyi veEuropean vane $ 262.5 miriyoni emadhora ekuUS. Hupfumi hwakananga kubva kumatunhu akasara ndeaya anotevera: North America $ 5 mamirioni, South America $ 2018 mamirioni, uye Caribbean / dzimwe nzvimbo madhora makumi matatu nematatu.